Ebumnuche 5 Ndị Ahịa na-etinyekwu Aka na Mmemme Iguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa | Martech Zone
Ebumnuche 5 Ndị Ahịa na-etinyekwu Aka na Mmemme Iguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa
OkpokoroTwist, ahịa ahịa iguzosi ike n'ihe, na Indị Ọhụrụ nyochara ndị ahịa 234 dijitalụ na ụdị Fortune 500 iji chọpụta otu esi ejikọ ndị ahịa na mmemme iguzosi ike n'ihe. Ha mepụtara ihe omuma a, iguzosi ike n'ihe Landscape, yabụ ndị ahịa nwere ike ịmụta etu iguzosi ike n'ihe si dabaa n'usoro ire ahịa nke otu nzukọ. Ọkara nke ụdị niile enwegoro usoro eji eme ihe mgbe 57% kwuru na ha ga-abawanye mmefu ego ha na 2017
Kedu ihe kpatara ndị ahịa ji etinye ego na Mmemme Ikwesị ntụkwasị obi nke Ndị Ahịa?
Njikọ aka - ma ị B2B ma ọ bụ B2C, ijide n'aka na ndị ahịa na-etinye aka ma na-eji ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị eme ihe ga-eme ka njigide na uru bara ụba.
Mee azụmahịa - Idobe uche ma na-akwụghachi ndị ahịa ụgwọ mmụba na ohere iji soro ha zụọ ahịa.
Dịkwuo Emefu - ebe i mebiela ihe mgbochi ntụkwasị obi, ndị ahịa ugbu a ga-ewepụtakwu ego na gị… itinye sistemu iji kwụọ ha ụgwọ dị oke egwu.
Mepụta Njikọ - ịkwụghachi onye ahịa ụgwọ maka ịkekọrịta ịgba akaebe ha bụ ahịa ahịa kachasị mma ị nwere ike itinye ego na ya.
Jikọọ / Leverage Data - site na ịghọta ihe na-akpali ndị ahịa gị, ị nwere ike hazie onyinye ị maara na ha ga-enwe mmasị na ya.
Nnweta, njigide, na mgbali nwere ike ịbụ ihe mmetụta dị mma site na mmemme mmemme iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa. 57% nke ụdị niile na-ele iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa ha anya ka ihe ịga nke ọma, 88% mgbe mmemme a nwere ọtụtụ! N'ụzọ dị mwute, naanị 17% nke ụdị nwere ọtụtụ mmemme iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa n'ihi ihe mgbochi nke ịhazi, ntinye, na nchịkọta data.
Tags: ndị na-emepụta ihe ọhụụonyenweahịaezi ndị ahịaahịa iguzosi ike n'ihe ahịanjigide ndị ahịaụgwọ ọrụ ndị ahịanyocha ahịannyocha e mere
Mygha nke DMP na Ahịa